जब कुकुर आफै को’रोना विशेष अस्पतालमा भर्ना भयो. – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /International/जब कुकुर आफै को’रोना विशेष अस्पतालमा भर्ना भयो.
काठमाडौं । अहिले विश्वभर फैलिएको को’रोना म’हामा’रीका कारण विश्वभर अ’स्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको अ’भाव सिर्जना भएको छ । नेपालमा पनि अ’स्पतालमा बेड नभएपछि स्कुलमा लगेर उपचार थालिएका समाचार आइरहेका छन् ।
भारतमा पनि यो अवस्था छ । तर भारत बिहार राज्यको पटनामा भने एक फरक दृश्य देखिएको छ । यहाँको नालन्दा मेडिकल कलेज अ’स्पताल (एनएमसीएच) लाई को’रोना समर्पण अर्थात को’रोना सं’क्र’मितहरुको मात्रै उपचार गर्ने अ’स्पताल बनाइएको छ । केवल को’रोनाबाट पीडित बि’रामीहरूको यहाँ उप’चार भइरहेको छ ।